KE, NGABA UKUPHELA KWEBOJACK HORSEMAN KUYANELISA? - UMKHWELI WEHASHE
Ngaphantsi Kwezisele Iidragoni
Umboniso We-Krypton Tv
Ke, ngaba ukuphela kweBoJack Horseman kuyanelisa?
Kunye UBoJack Horseman Ekugqibeleni kugqityiwe, kuyakubakho impikiswano eninzi malunga nokuba iphele kanjani kwaye ingaba iyanelisa, ikopi, okanye bekufanele ukuba iphelise isiqendu kwangethuba. Kwaye, mfundi othandekayo, ndiwela kwindawo ethile phakathi.
** Abaphangi kwisiphelo sokugqibela seNetflix's UBoJack Horseman . **
Ingxelo yemishini ngoDisemba 16 ka-1991
UBoJack Horseman Indawo kwindawo kumabonakude zeitgeist hit phantse ngokugqibeleleyo, kwaye umboniso uqhubekile nokuziphakamisa ngalo lonke ixesha lonyaka, ukuya kuthi ga kwinqanaba apho ndicinga ukuba ulindelo lwesiphelo yayilelona liphezulu kumboniso ukusukela Iphula kakubi okanye Indoda ephambene . Kukho ukutyalomali okuninzi ngokweemvakalelo kwinto ethethwa kukuba nalo mlinganiswa simbonile umzabalazo, usilela, kwaye wenzakalisa abanye, unesiphelo.
Umbono oSuka eFlafini ezantsi sisiqendu sokuqala soluhlu, kwaye ibonisa iBoJack ukuba nesidlo sangokuhlwa kunye neziporho ezintle zangaphambili. USarah Lynn, uHerb Kazazz, umama wakhe uBeatrice Horseman, umalume wakhe ongasekhoyo uCrackerjack, umhlanganiselwa kayise ne-Secretariat, kunye no-Courtney Jackson-Jackson, Oonobhala intombazana-nayo uZach Braff. UBoJack uphatha itheko lesidlo sangokuhlwa ngokuziqhelanisa kodwa uyazi ukuba akahlali.
Kancinci, njengoko isiqendu siphumla, siyaqonda ukuba eli theko lesidlo yingqondo kaBoJack ejongene nokufa kancinci. UBoJack waqhekeza ikhaya lakhe elidala ngelixa wayenxilile kwaye ephezulu, waba mandundu, emva koko wangena echibini. Wakwazi ukuphuma — ekuqaleni. Ngelo xesha, wabiza uDiane ukuba aze kumsindisa, kwaye akazange athathe. Kwakhona, uhlala eChicago, ke nokuba uthe weva umyalezo wakhe, ngekhe amsindise. Njengoko ubuchopho bukaBoJack buhambelana nezi nkumbulo, umamela ingxelo yengqondo yelizwi likaDiane njengoko ubumnyama buza.
Emva koko, uyavuka.
Kulungile ngexa lokugqibela kubonisa ukuba uBoJack wafunyanwa lusapho olunendlu ngoku, babanjwa, kwaye bathunyelwa ejele iinyanga ezili-14. Ukhululwa emtshatweni wePrincess Carolyn kuJona, kwaye siyabona ukuba uBoJack uyazi ukuba angahlala ejele ejele okanye erehab, kodwa ukuphuma kuthetha izilingo ezintsha kunye nokuzabalaza ekufuneka efunde ukujongana nako. Simbona enxibelelana neqela labahlobo bakhe, kwaye kuyacaca ukuba bakhona abaya kuhlala bekhona ngandlela thile-iNkosazana uCarolyn kunye noMnumzana uPeanutbutter- kodwa uTodd noDiane, abantu ababemazi ngcono, ngekhe babekho usondele ngokwenene kuye kwakhona.
Kwaye kufuneka aphile naloo nto.
Kanye njani Indoda ephambene' Umxholo ovulekileyo womfanekiso womntu owela ekufeni kwakhe wenza ukuba abantu bazive ukuba iya kuba sisiphelo sikaDon Draper, indawo ka BoJack echibini, kunye noDiane noMnumzana Peanutbutter bemjongile, bekucingelwa ukuba babonakalisa isiphelo sakhe. Ngelixa umboniso ungazibophelelanga kuwo lonto Ukugqiba, sasondela ngokwenene.
umatiloshe wenyanga haruka kunye michiru
Nangona kunjalo, ndicinga ukuba bekufanelekile ukuba isigcawu sokugqibela sikaBoJack kunye noDiane eluphahleni, sinento ekucingelwa ukuba iyincoko yokugqibela abaza kuba nayo. Kwaye bobabini balungile kuloo nto, ungazami ukuyilwa, kwaye uBoJack ucwina nje kule mizuzu yokugqibela kunye nomhlobo wakhe (wangaphambili) osenyongweni.
Ngexesha lesihlanu, uDiane uxelele uBoJack ukuba akukho bantu abalungileyo okanye abangalunganga, kukho abantu abanesakhono sokwenza okulungileyo nokubi. U-BoJack uchithe ixesha elininzi esenzakalisa abantu kwaye ezama ukubamba indlela yokuphuma eluxanduva. Naxa esenza kakuhle kudliwanondlebe lokuqala emva kokuba inqaku liphume malunga nemizuzu yakhe yokugqibela noSara Lynn, akanakunceda uzuko luye entlokweni yakhe. Uyimpazamo, hayi kuba engumntu ombi, kodwa ngenxa yokuba engazi ukuba angaluthabatha njani uxanduva.
Ngoku kufuneka aphile nento yokuba umntu ambize ngalo mzuzu ukuba amsindise wayekhathazwe nguloo mnxeba-ukhathazwa yingcinezelo awayebekwe phantsi ukuba abe ngumtya nethunga womntu. Ukufa kuyonelisa, ngokomxholo, kodwa ndicinga ukuba umntu olumkileyo, uBoJack kufuneka aphile. Kuya kufuneka akwazi ukujongana nezenzo zakhe, ukuze akhule kuzo. Emtshatweni, uyayibona indlela ahamba ngayo anelisekile ngumbono wokufundisa ukubambela entolongweni, ukuya kubuya emva nje kokuba efumanise ukuba kukho ukungxola okumngqongileyo.
Oko Icocekile i-BoJack kwaye iyakhumbuza ukuba njengesihelegu somntu, ibisenziwa nguye. Umboniso awufuni ukunika uBoJack ukufela ukholo ngengozi; ifuna umcelimngeni wokuthatha isenzo sokuzisola-okokoko kuthatha.
iyure yobugqwirha irne movie irayisi
Knights Zeriphabliki Endala
kwenze njani ukuba ihabes ixhwithe i-persphone
april o neil ugqirha ngubani
meme ulungelelwaniso d & d
Umyalezo wendalo iphela ufumene ugcino
Ityhefu kunye noEddie
umnqwazi kwimpikiswano yonjiniyela wexesha